MAXAY U FASHILMEEN URUR DIIMEEDYADA SIYAASADEED? [BAADIGOOB XAQIIQ] (QEYBTII 1AAD) – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Eebe SWT goortuu dunidan abuuray wuxuu u dhigay xeerar ey qasab tahay iney raacaan dad iyo duunyo iyo dhamaan abuurka oo dhan; qaarka garaadka leh iyo kuwaan laheynba. Xeerarkaas waxaa kamid ah, xeerka nolosha, xeerka geerida, xeerka guusha iyo xeerka fashilka, xeerka irsaaqda iwm. Diintaad doonto heyso, ama diinlaawaba noqo – waxaad ku qasban tahay inaad xeerarkaas u hogaansanto, ama waxaad ku danbeyn mid fashilma oo halaagsama. Xeerka koowaad ee ilaahey koonkaan u dajiyay waa; in Alle kaligii yahay, aan isbedeleyn, suganna – taladana ey kaligii u sugnaatay. Wax walba oo Alle ka sokeeyana ey tiro yihiin, oo isbedelaya, kala duwan – taladoodana ey ka dhexeyso dhamaantood si walba oo ey u kala diin, dhaqan iyo jinsiyad duwan yihiin. Taasina waa laf-dhabarta towxiidka, oo waxay na fahansiinaysaa fahanka dhabta ah ee towxiidka iyo kali ahaanshaha ilaahey. Eebe wuxuu Quraanka Suurat Al-ikhlaas ku yiri; “waxaad dhahdaa (nebiyoow) Eebe waa kali (wehelna maleh) * waana sayid deeqtoon*Eebe wax ma dhalin isna lama dhalin*wax lamid ahna ma jiro*”
Urur diimeedyada siyaasadeed ama ururada lagu naynaaso islaamiinta, waxay guluf kusoo jireen badidood muddo qarni kudhow, qaar dhowr qarni. Waxayna dhamaantood had iyo gooraale ku hadaaqaan iney dib usoo celinayaan khlifadii Islaamka. Khilaafo warkeeda iska daayee, tuulo ma eysan soo celin. Yeelkadeedee, dhigaaladaan ‘BAADIGOOB XAQIIQO’ ee taxanaha ah waxaan ku falanqaynayaa oo intii aqoontayda i gaarsiiso ku kala dhig-dhigi doonaa sababta ey u fashilmeen urur diimeedyada siyaasadeed. Kama hadlayo wadaado aan iyagu siyaasad ku jirin oo uun dadka diinta bara, ee waxaan ka hadlayaa waa ururada magaca diinta siyaasad kusoo galay oo fashilmay. Su’aalaha u baahan in la isweydiiyo waxaa weeye; sidee ragaan magaca ilaahey ku dhowaaqaya ey u fashilmeen? Ma aqoonta diintaa ku yareed? Ma aqoonta maamulka iyo siyaasadda ayeeysan waxba ka aqoon? Mise nimanka waa la shirqoolay? Mise ilaahey ayeey ka been sheegayeen? Mise nimanka waxay u fashilmeen iney ka boodeen xeerarkii ilaahey koonkaan u dajiyay? Su’aalahaas iyo qaar kaloo badan waa inaan jawaab aan u helnaa si aan u fahamno waxa sababay fashilka baaxadda weyn ee ku dhacay ururo diimeedka siyaasadeed, anigoo iska taagi doona xaglooyin kala duwan.
Waxaan isku dayi doonaa inaan xoogeey ka taabto taariikhda aadanaha iyo casriyadii kala duwannaa ee ey soo martay – anigoo rajaynaya in aqristuhu uu helo af-biloow u fududeeya fahamka ujeedka dhigaalkan. Waxaan sidoo kale eegi doonaa qaabkii uu ergaygii ilaaheey (SCW) u dhisay dawladdii muslimiinta ee uu ka taagay magaalada Madinah – si aan tusaalooyin uga soo qaadano. Ugu danbeyn waxaan ka hadli doonaa qaar kamid ah urur diimeedyada siyaasadeed ee abuurmay tan iyo markii la riday dawladdii Cusmaaniyiinta, anigoo marka hore qeexaya maxaan ula ujeedaa urur diimeed?
CASRIYADII KALA DUWANAA EE AADANAHA
Tan iyo waagii Nebiyullaahi Aadan arlada la keenay, oo aadanuhu tarmeen, Eebe wuxuu aadanaha usoo diriyay ergooyin xanbaarsan fariimaha Eebe – kuwaas oo taabanayay hadba xaaladda uu aadanuhu ku jiray. Tusaale, nebi Nuux (CS) waxaa loo soo diray qawkiisa inuu gaarsiiyo fariinta ilaahey ee ah in ey Alle kaligii caabudaan. Qawmka nuux xiligaas waxay caabudi jireen shan nin oo awoowayaashood ahaa oo saalixnimo lagu sheego, lana kala oran jiray; wud, suwaac, yaquut, yacuuq iyo nasra. Muhiimadda nebi Nuux (CS) waxay aheyd in qawmkiisa uu uga nasteexeeyo caabudida wax Alle ka sokeeya, ilaahey oo ka waramaya shaqadii Nuux loo soo diray wuxuu yiri:
“waxaan u dirnay Nuux qawmkiisa, wuxuu ku yiri; qamkaygiiyoow caabuda ilaahey, idiinma sugna ilaah kasoo hadhaye, anigu waxaan idiinkaga baqayaa cadaab maalin weyn”. Tusaalaha kale, Nebi Luudh (CS) waxaa loosoo diray inuu qawmkiisa ka reebo faaxishada raga loo galmoonayo, oo cid qawmkaas uga horeysay eysan jirin, Eebe wuxuu yiri:
“xusuuso nebi Luudh markuu qawmkiisa ku yiri ma xumaanta ayaad la imaanaysaan oo uusan idinkaga horeyn qof caalamiinta kamid ah” aayaddaan wuxuu Alle ku qeexay muhiimadda shaqada nebi Luudh iney aheyd inuu qawmkiisa uga digo xumaanta raga rag u galmoonaya. Nebiyadii kale iyo ergooyinkii kale ee Eebe soo dirayay waxaa laloo soo diri jiray fariin qusaysa hadba bulshadaa ey u digayaan ilaa laga soo gaaro nebi Muxammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee (NNKH), oo isaga fariinta uu Eebe ka siday ey aheyd mid dhan walba ah, oo dhamaystiran. Casriyada sooyaalka aadanaha waxay taariikhyahannada u kala qeybiyaan laba qeybood oo waa weyn: b) casrigii tuulooyinka iyo t) casrigii magaalooynka.
La soco qeybta xigta
Maxaa ugu wacan guusha dalka Israaiil?